10 Khaladaad Twitter | Martech Zone
Arbacada, Juun 12, 2013 Talaado, Juun 11, 2013 Douglas Karr
Sida nin maamulo nus dersin xisaabaadka Twitter-ka (shaqsi, buug, shirkad, baloog iyo beel), waa inaan ku raacsanahay # 8 qoraalkan. Waxaan ka shakisanahay Ciidanka Badda Navy @xDayaannax Koontada twitter-ka waxay rabtaa inay wax ka maqasho Blogging Corporate @xikmad… Cidina ma rabto inay maqasho dhaleecaynteyda siyaasadeed ee koontada shaqsiyadeed!
Twitter, sida barnaamij kasta oo kale, ayaa ah hab kale oo dadku ugula xiriiraan shakhsiyaadka kale. Oo waxaa jira dhaqammo khaas ah oo lagula taliyay Twitter oo ku fashilmay taas, halka laga yaabo in la isweydiiyo xitaa inay jiidaan Twitter, xitaa way ka sii waxyeelo badan yihiin marka dhab ahaan lagu sameeyo dadweynaha. Marka haddii aad dhacdo inaad sameyso mid ka mid ah 10-ka khalad ee xukunka (macaan DashBurst iskaashi lala yeesho Nooca Maple) fariimahaaga tweets-ka ah ama kaba sii daran dariiqyada, fadlan isla markiiba istaag!
Waan ku faraxsanahay xigashada dhiirrigelinta xilliyeed (# 7) tweet dhiirigelinta sidoo kale!
Tags: qarxiskhaladaadka twitterka
Baraha Bulshada oo ah Qalab Maareynta Dhibaatada
Adeegyada MOS SEO
Jun 17, 2013 saacadu markay ahayd 1:07 AM
Anigu khalad uma arko qodobbada qaarkood. Tani waa sida ay dadku ugu dhaqmaan nolosha dhabta ah. laakiin iyagu sidan kuma dhaqmaan Twitter.
Jun 17, 2013 saacadu markay ahayd 4:01 AM
Waad ku mahadsan tahay i siinta iimaanka in dadka qaarkii ay iska daayaan dabeecadahaas aniga oo kale! hehe waan qirayaa in aan da 'yar ahay oo curmudgeonly, laakiin nolosheyda ma arki karo sababta aysan dadku waqti u siin in ay xoogaa iska sii ogaadaan waxyaabahaan qaarkood. Xusuus gaar ah waa in loo gudbiyaa tixraacyada (ujeedada wanaagsan) dhiirrigelinta ah ee qashinka diimeed iyo ruuxi ahaaneed ay iga dhigayaan inaan kudhawaro markay ka muuqato quudinta.
Sep 24, 2013 at 6: 42 AM
Kuma raacsani # 1 iyo # 7, qof kastaa wuxuu u adeegsadaa Twitter sababo kala duwan awgood, dadkuna waxay leeyihiin ikhtiyaar aysan raacin, laakiin guud ahaan waa liis aad u wanaagsan
Sep 24, 2013 at 10: 07 AM
Waan ogolahay - runtiina ma jecli liis kasta oo “xeerar” ah oo la bixiyo sida ay baraha bulshada u yar yihiin.